Waxaa Jira Cabashooyin Ka Socda Safarka Karshe Bari Express | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Central Anatolia06 AnkaraWaxaa Jira Cabashooyin Ka Socda Safarka Karshe Bari Express
16 / 03 / 2020 06 Ankara, 36 Kars, Gobolka Central Anatolia, Nidaamka Isgaadhsiinta ee Intercity, tareenka, Gobolka Waqooyi Bari, GUUD, Headline, TURKEY
waxaa jira cabashooyin ku saabsan safarka iska soo horjeed ee bari ka soo horjeedka
Kuwa u safray inay daawadaan cillad aan dhammaad lahayn oo si dhakhso leh uga socota daaqadda tareenka diiran, inay cunaan goose ku yaal Kars, inay ku duubaan barafka ku yaal Sarıkamış, iyo in ay ku safraan fardaha-lugaha ee balliga Çıldır, ayaa ku niyad-jabsan aragtida ay arkaan oo ay jiraan cabashooyin badan oo ku saabsan safarka.
Kars heli karo dowlad magaalada brand la horumarka ay dalxiiska sanadihii ugu dambeeyey, Turkey waxa uu noqday mid ka mid ah meelaha ugu badan ee jiilaalka muhiim ah. Gaar ahaan safarka Kars, ee lagu sameeyo tareenka, ayaa baahi weyn laga qabaa. Waxay ahayd hawl aad u jacayl badan oo caan ah in la tago Kars ka dib Ankara, ka dib Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan iyo Erzurum, iyo in lagu lumiyo jidka cad. Sawirada laga soo qaaday warbaahinta bulshada ayaa daliil u ah tan. Si kastaba ha noqotee, tikidhada safarka tareenka ayaa soconaya isla marka ay iib yihiin. Sheegashada ah in shirkadaha dalxiiska ay horay u xireen aasaaska ayaa ah mid ka mid ah dhalleeceeynta joogtada ah ee TCDD. In kasta oo Wasaaradda Dalxiiska ay caddeysay in tani aysan ahayn mid ku saleysan hadaladii laga soo gudbiyay waqti ka waqti, kuwa iskudaya inay iibsadaan tikidhada iyagoo si joogto ah ula soconaya websaydhka 'TCDD' kuma qanacsana hadaladaas.
Waxaa jira laba tareeno oo loo tago Kars, kan waa Eastern Express halka kan kalena uu yahay Eastern Tour Express. Tigidhada tareenka ayaa lagu iibiyaa aragti ahaan 30 maalmood kahor bixitaanka. Safarka uu ku tagayo Eastern Express wuxuu qaadanayaa 24 saac oo tigidhadu waa 58 TL. Sleepers waxaa laga heli karaa oo keliya Dalxiiska East Express. Safarku wuxuu qaadanayaa ku dhawaad ​​32 saacadood iyadoo la adeegsanayo 'Touristic East Express', oo fasax qaadata seddex wado. Qiimaha laba gaari waa 600 TL. Haddii aad noqonaysid qof kaligiis ah, waxaad bixineysaa 480 TL. Si kastaba ha noqotee, helitaanka tigidhadaan waxay u dhowdahay inay adagtahay sida guuleysiga gunno bakhtiyaa nasiibka. Sababtaas awgeed, kuwa raba inay khibrad u yeeshaan halkaan ayaa daruuri u noqonaysa socdaaladii. Jolly Tur, Vals Tur, Prontotour, MNG Dalxiiska, Setur, Gezimod, Turistica waa qaar ka mid ah tobanaan shirkadood oo abaabula socdaaladan. Booqashooyinka qaarkood waxay ka yimaaddeen Ankara illaa Kars oo ay la socdaan Dalxiiska Bariga Express waxayna ku soo noqdaan diyaarad. Waxa kale oo jira kuwa ka soo horjeedda, kuwaas oo diyaaradda ku taga Kars oo ku soo celiya tareenka. Booqashooyinka xaddidaya safarka lagu tagayo Dalxiiska Bariga Express ee u dhexeeya Erzurum iyo Kars Kuwa ka qayb gala socdaaladan waxay qayb ka mid ah safarka u tagayaan Erzurum diyaaradda, ka soo qaad halkan tareenka oo aado Kars. Safarka laabashadu wuxuu ka dhacayaa isla isla wadadan.
Safarka tareenka qarsoon
Safarradan, oo lagu suuqgeeyay hal-ku-dhigga “Ka eeg Anatolia oo leh tareen taariikhi ah”, “Baro adduunka sixir-bararka Kars”, “Khibrad u yeelo qurux kala duwan xilli kasta”, oo ka dhaca 3-4 maalmood joogitaanka tareenka iyo kharashka, maalinta hoy iyo xulashadaada. Marka loo eego shirkadaha dalxiiska, waxay ku kala duwan yihiin 1700 TL iyo 2500 TL. Dabcan, marka aad ka qeybqaadatid safarro dalxiis, qiimaha ayaa kordhaya sida saxda ah.
Waxaan kaqeyb galnay mid kamid ah safarradaas waxaana bixinay 1.750 TL safarka guddiga Kars oo ay kuxiran yihiin afar habeen, mid tareenka lagu raaco. Tan iyo markii Touristic Eastern Express ay ka ambabaxday Ankara, safarka u dhexeeya Istanbul iyo Ankara waxaa ku dhacay Xawaare Sare oo xawaare sare ku socda (YHT). YHT, oo ka tagtay Söğütlüçeşme abaarihii 09.15 subaxnimo, wuxuu ku ankaraa Ankara qiyaastii 14.00. Dalxiiska East Express ayaa ka dhoofay Old Ankara Station saacaddu markay ahayd 16.00. Safarka labaatameelood oo sariirta lagu xardhay waa mid aad u macaan oo xiiso leh, sida laga arki karo sawirrada laga wadaago warbaahinta bulshada. Isla marka ay dhallinyardu tareenka galaan, ma iloobaan inay xaflad u sameeyaan baabuurta hurdada ee ay ku qurxiyaan nalalka kirismaska. Wax iib ah oo khamri ah kuma jiraan tareenka, laakiin dabcan waad la imaan kartaa. Bucshirooyinka 'Champagne,' wines furan ... Qaar ayaa u dabaaldega dhalashadooda, qaarna u dabaaldega sannad-guuradooda. Si kastaba ha noqotee, way adag tahay in la yiraahdo safarku waa mid raaxo leh. Haddii aad tahay afar ama in ka badan oo dad ah, uma badali kartid gaari laba kursi leh, markaa waxaad ugu beddelan kartaa gaariga cuntada si aad ula sheekaysato. Waa mamnuuc in la keeno cuntada iyo cabitaannada halkan. Liiska makhaayadda ma ahan qaali, laakiin looma sheegan karo in ku filan. Tusaale ahaan, saxanka quraacda waa 20 TL shaahkuna waa 3 TL. Hadaad rabto inaad qadada cuno, boogaha hilibku waa 22, digaag waa 17, qaxwada turkigu waa 6 TL. Rakaabku badanaa waxay doorbidaan inay iibsadaan cunno iyo kuleyliyeyaasha biyo kulul oo ay wax ku cunaan markabkooda. Taas macnaheedu waa in lagu dhejiyo laba-gaari-laba-lugood.
Qeybta ugu adag ee safarka waa musqusha. Gawaarida kasta waxaa ku yaal laba musqulood, mid alafranga ah iyo mid Turki ah, 50 qofna waxay adeegsadaan musqulahaas. Waxaad rajaynaysaa in nadaafadda lagu arko tareenka dalxiiska, laakiin xitaa musqulaha qaarkood, biyuhu biyuhu kuma socdaan. Gaar ahaan dhamaadka safarka, mushkiladda musqusha waxay isu beddelaysaa jirdil, urta ayaa noqoneysa mid aan loo dulqaadan karin.
Wadada-tareenka ee 1360-kiiloomitir ayaa la filayaa inay ku dhawaad ​​32 saacadood la jabto Ilic, Erzincan iyo Erzurum. Laakiin tani waa jawi rajo wanaagsan. Safarkayagu wuxuu socday 34,5 saacadood, aad ayaan u nasiib badneyd sida ay sheegeen saraakiisha tareenka.
Dheeraad kuma jiraan qiimaha (Nofembar Tirpancı /Ardahanhaber ah)
Socdaalaha Hibo-Fudud oo Loogu Baahan Yahay Mushaharka Tareenka
"Waxa jira Burcadnimo Karabakh, xasuuq ka dhacay Khojaly" Bandhigga ayaa ka biloowday Express Express
Maanta taariikhda: 23 August August 1991 waxaa la geeyay Haydarpasa-Kars iyo Eastern Express
Maanta taariikhda: 23 Agoosto 1991 Eastern Express oo u dhexeeya Haydarpasa iyo Kars ...
East Express Full View "Moment Photo Exhibition oo ka furan Xarunta Tareen ee Kars